Baaruud madow, 2-amino-4-nitrophenol, baaruud madow BR - Foring
Warshaddeenu waxay leedahay qaab farsamo sare oo ay ku soo saarto Sulfur Black B, Sulfur Black BR, 2, 4-Dinitrochlorobenzene iyo 2-Amino-4-nitrophenol.
Burbur madow ama madow oo leh xoog kala duwan. Dheecaan ahaan inta badan loo isticmaalo cudbiga, viscose, vinylon iyo warqad.
Hoos kala duwan oo leh baaruud Black BR.
Jaale midab leh oo dhalaalaya oo dhalaalaya. Soo saarista midabyada, sunta cayayaanka iyo dawada oo dhexdhexaad ah.
Jaale huruud ah, budo. Soosaarida midabyada iyo dawooyinka dhexdhexaadka ah. Badanaa waxaa loo isticmaalaa aashitada buniga ah RH, cagaarka cagaaran 3G, madow BL, BRL, BGL.
Foring Import & Dhoofinta Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2004. Shirkadeenu waxay heshay ISO 9001: 2006 iyo ISO 14000. Waxaan soo ururinay khibrad hodan ah oo loogu talagalay dhoofinta alaabada kiimikada ee Shiinaha Iyada oo ku saleysan warshaddeenna xoogga badan, waxaan awoodnaa inaan ku taageerno baaruud Black iyo dhexdhexaadiyaasheeda suuqa dibedda.
Waxyaabaha soonka wanaagsan, qiimaha waxtarka leh & sahlanaanta ku-daba-galka xaaladaha kala-soocidda qiiqa, semi-joogto ah iyo isdaba-joog ah ayaa ka dhigaya mid ka mid ah dyestuffs-ka ugu caansan.
Dheecaan ahaan inta badan loo isticmaalo cudbiga, viscose, vinylon iyo warqad.
38aad Dye + Chem Bangladesh Expo 2019
Sebtember 4, 2019 ilaa 7da Sebtember, 2019 ee Shirka Caalamiga ah ee Magaalada Bashundhara, Shirka Caalamiga ee Magaalada Bashundhara, Purbachal Express Hwy, Dhaka, Bangladesh. CEMS-Global USA's International `` Dye + Chem series of Exhibitions '' ayaa gaadhay heerkeedii ...
Midabka & Chem Pakistan EXPO
Midabka & Chem Expo waa munaasabad gaar ah oo lagu bixinayo adeegyo dhammaystiran oo tayo sare leh kiimikooyinka, dheehyada iyo warshadaha isbahaysiga ah si loo sameeyo astaan, loo horumariyo suuqyo cusub loona kaxeeyo iibka. Midabka & Chem Expo 2019 sidoo kale waxay aragti ka siineysaa ...
CPhI waa dhacdo dawooyin la aasaasay oo ka badan 30 sano oo khibrad ah oo la isugu keenayo dadka dhaqaajinaya iyo kuwa ruxaya ee pharma. Magaca aasaasiga ah ee warshadaha, CPhI Worldwide waa mid muhiim u ah kalandarka pharma oo mideeya kumanaan pha ...